Temple Tooth Buddha - Sri Dalada Maligawa ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Temple Tooth Buddha - Sri Dalada Maligawa
Temple Tooth Buddha - Sri Dalada Maligawa. Kandy
22 Desambra, 2019
Temple Tooth Temple ao Kandy
Famaritana ny tempolin'i Kandy Tooth Relic
Pooja (rehefa hitanao ny Aty Buddha)
Ny vidin'ny fitsidihana ny tempoly, Pooja fandaharam-potoana. Làlan'ny Tempoly
Aiza ny Tempolin'ny Relima Tooth?
Famerenana ny Buddha Tooth Temple
Fampitana ny Tempolin'i Buddha Tooth (Sri Dalada Maligawa)
Iray amin'ireo zava-dehibe lehibe indrindra any Sri Lankan dia ny Tooth of Buddha, nitazona tao amin'ny tempoly iray tao an-tanànan'i Kandy.
Ny nify an'i Buddha dia omena fananana ody. Anisany manokana, ny fananana azy dia nanana ny fahafenoany fahefana rehetra. Raha ny fifandraisana amin'ireto relijiozy ity dia lasa fananan'ny tarana-mpanjaka.
Ny tempoly mihitsy dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny lova UNESCO.
Ny tempoly mihitsy dia aseho amin'ny maritrano mari-pankasitrahana sy ny haingon-trano anatiny. Voahodidin'ny mpanamory koa izy io ary misy rindrina roa stylistically maneho ny rindrin'ny rahona ary rindrina onja. Mandritra ny fankalazana isan-karazany, ny labozia jiro sy ny jiro dia apetraka ao anatin'ny fisokafana mihosin'ireo rindrina ireo. izay manome voninahitra ny tempoly amin'ny fomba tsy manam-paharoa.
Tempolin'i Buddha Tooth amin'ny fialantsasatra
Manana efitrano mahaliana maro be ilay tempoly. Toy ny:
Efi-trano misy seza fiandrianana
Fitsipika mahatoky volamena
Efitrano miaraka amin'ny sary sokitra Buddha sy frescoes mampiseho ny tantaran'ny mahita ny Tooth of Buddha
Efitrano mahaliana iray miaraka amin'i mummy Raji elefanta, izay nandritra ny faha-XNUMX taonan'ny fiainany, dia namindra toerana nandritra ny fety fanao isan-taona Esal Peraher.
Ny mummy an'ny elefanta Rajah ao amin'ny Tempolin'ny Tooth Relic
Fitsipika momba ny fitsidihana ny tempoly
Aza hadino fa ny fikaonan-dàlana dia manana fifehezana henjana amin'ny endrinao:
Akanjo mifono volon-koditra mametaka ny soroka, ny lohalika, ny sandroka, ny tendany (ho an'ny vehivavy).
Ataovy azo antoka ny fidirana amin'ny kiraro tsy misy pentina (na ba kiraro). Eto am-pidirana fitehirizana maimaim-poana ny kiraronao
Ny akanjo mifangaro, ny palitao pataloha sy ny akanjo hafa izay mety maneho tsy fanajana dia voarara.
Eo am-pidirana dia afaka mividy na manofa sarung (sari, scarf) ianao
Miomàna hiatrika ny zava-bita tena mahasarika indrindra ity tempoly ity. Fatratra hatrany izy io, indrindra mandritra ny famantaranandro Pooja. Misy fisondrotana be dia be fa alohan'ny hanantonan'ny tranokala ny tempolinao dia tsy maintsy miatrika anton-javatra lehibe ianao!
Hirotsaka ao amin'ny Tempolin'ny Relima Tooth
Araka ny angano, aorian'ny fandevenana ny Bouddha, nify 4 dia nesorina tamin'ny lavenona, ka ny iray tamin'izy ireo dia nentina tany Sri Lanka tamin'ny 371. n. f.
Tany am-boalohany no toerana nitehirizana ireo rohy Anuradhapura, taty aoriana dia nifindra tany an-tanàna ilay nify Polonnaruwa, ary efa tamin'ny taonjato faha-18 niaraka tamin'ny fifindran'ny renivohitr'i Sri Lanka, dia nanjary fananan'ny tanàna izany Kandy. Tao no nananganana azy manokana ny tempolin'i Sri Dalad Maligawa (Tempolin'ny Tooth of the Buddha). Hatramin'izay dia ny tranobe dia ao amin'ity tempoly ity.
Tamin'ny 1998, ny vondrona islamika "Tigers of the Liberation of Tamil Ilam" dia nanao fanafihana fampihorohoroana mikendry ny handrava ny nify masina. Fa ny vokatr'izany dia ny tempoly ihany no simba fa tsy ny relic irery ihany. Tsy izany ihany no fanandramana nifitoerana amin'ny nono, fa tsy nisy nahomby.
Pooja. Rahoviana aho no mahita ny nify nify Buddha?
Sarotra amin'ny ambainy, koba fitaratra azo entina miaro ny harona miaraka amin'ny Tooth of Buddha
Tamin'izay fotoana izay dia ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka sy ny moanina ny fidirana amin'io tempoly io, fa ankehitriny kosa misokatra ho an'ny mpanatrika rehetra ny tempoly. Fa mivantana raha mahita nify dia saika tsy ho vita. Afenin'izao tontolo izao ao anaty harona fito (amin'ny endriny stupa), nifanena tao anatiny ary nipetraka teo amin'ny felam-boninkazo volamena iray napetraka eo amin'ny seza fiandrianana.
Izany rehetra izany dia arovana amin'ny fitaratra tsy voageiky ny bala ary rakotra lamba. Intelo isan`andro, dia io varavarana io dia misokatra (fombafomba Pooja) ary vao afaka mahita ireo harinkarena ireo amin'ny alàlan'ny fitaratra.
Casket miaraka amin'ny Tooth Relic
Mandritra ny pooja dia feno olona tanteraka ny tempoly.
Esala Perahera Festival (Esala Perahera)
Mandao ny tempoly indray mandeha isan-taona isan-taona ny tranokala, mandritra ny fetin'ny 10 andro manan-danja indrindra ao Sri Lanka, Esala Perahera (Esala Perahera), izay natao tamin'ny volana Jolay sy Aogositra tao Kandy. Fandaharana mahomby izany mba hanomezam-boninahitra ny relic lehibe - ny Tooth of the Buddha.
Nisy nify nalaina avy tao amin'ny tempoly tamin'ny misasak'alina tamin'ny andro fanokafana ny fety, tamin'ny andrana fombafomba izay ahitana elefanta an-jatony maro, haingo, mpitendry mozika, mpitsikilo ary mpikamban'ny fianakaviana mendri-kaja any Sri Lanka.
Ny vidin'ny fitsidihana ny Tempolin'ny Tooth Relic
Ny vidin'ny fitsidihana ny tempoly dia 1500 rupees (eo ho eo ny $ 9)
Sary sy famoahana horonantsary - 300 rupees
Ny vidin'ny tapakila ihany koa dia misy CD miaraka amina lahatsary iray momba ny tempoly sy ny tantaran'ny tranokala.
Azo ampiasaina ny fitsidihana ny tempoly manomboka amin'ny 5.30 a.m ka hatramin'ny 20.00 p.m. isan'andro
Fandaharana Pooja (Azonao jerena ny baoritra miafina ny ronana):
Ny Temple of the To Rel Relic dia hita eo amoron'ny farihy mahafinaritra any Kandy. Ny tranobe fotsy misy ny tafo mena dia tafangona eo akaikin'ny Farihin'i Kandy ary ao afovoany no misy trano izay nisy ny hareman'ny mpanjaka tamin'ny fotoana iray.
Eo akaikin'ny tempoly ihany koa ny fonjan'i Pattipyuva taloha, naorina tamin'ny 1803 amin'ny endrika tilikambo oktagon ho fonja. Taty aoriana, dia nanjary fitahirizan'ireo famoriam-boky malaza teo amin'ny ravina palmie izy io.
Mikasika ny faritry ny tempolin'ny Tempolin'ny Tooth Relic, misy ny lapan'ny mpanjaka koa.
Ny tranobe dia tazonina ao amin'ny tranobe misy rihana roa miaraka amin'ny elefanta elefanta iray amin'ny tarehy.
Tranonkala - http://www.sridaladamaligawa.lk/
telefaonina: + 94 812 234 226
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //g.page/sridaladamaligawa? mizara
Temple of Tooth Relic amin'ny sari-tany
Ny hevitra momba ny Kandy's Tooth Relic Temple
Famerenan'ny Tempolin'ny Tooth Relic (Google reviews)
Ny famerenana ny Buddha's Tooth Temple (Tripadvisor)
Raha ao Kandy ianao dia manoro hevitra anao aho mba tsy hahalasa ity tempoly ity. Eto dia azo inoana fa mahatsapa ny egregor mahery amin'ny toerana ivavahana. Indrindra mandritra ny Puja, rehefa manokatra ny lambam-baravarana izy ireo ary ny olona rehetra (afa-tsy mpizaha tany) dia manomboka mivavaka am-bavaka ... mahatonga fahatsapana maharitra izy io.
Ao koa amin'ity ... eto ianao dia afaka mirenireny .. ary mahita toerana mangingina hisaintsaina.
Ary tena tsara ny zaridaina manodidina.
Manoro hevitra anao aho hitsidika.